Nhasi uno Apple TV nhepfenyuro inotanga + nyaya yaLisey | Ndinobva mac
Iyo Apple TV + akateedzana "Nyaya yaLisey," yakanyorwa naStephen King uye nyeredzi weAward Award-anokunda Julianne Moore, kutanga nhasi, Chishanu, June 4 paApple TV +. Kubva pane yakanyanya-kutengeswa novel na Stephen King,uye yakashandurwa nemunyori iye pachake, "Nyaya yaLisey" inonakidza kwazvo inoteera Lisey Landon (Moore) makore maviri mushure mekufa kwemurume wake.
Apple yepakutanga akateedzana, "Nyaya yaLisey" ndeye inotungamirwa naPablo Larraín, uye inouya kubva kuna JJ Abrams 'Bad Robot Productions uye Warner Bros. King, Moore naLarraín ndivo vagadziri vakuru pamwe naAbrams, Ben Stephenson naJuan de Dios Larraín. Chikamu chega chega chakateedzana chakanyorwa naStephen King. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, naDane DeHaan ndivo vamwe vatungamiriri pamwe naMoore naOwen.
Kubva pane yakanyanya-kutengeswa novel na Stephen King,Yakagadziriswa nemunyori iye pachake, "Nyaya yaLisey" inonakidza kwazvo inoteera Lisey Landon (Moore) makore maviri mushure mekufa kwemurume wake, munyori wenhau anozivikanwa Scott Landon (Oscar anosarudzwa Clive Owen). Izvo zvakateedzana zviitiko zvekusagadzikana zvinokonzeresa Lisey kusangana nezviyeuchidzo zvemuchato wake naScott zvaakavharira nemaune kubva mundangariro dzake.
Iyo yakateedzana ine zvikamu zvisere uye isu tinofungidzira kuti ichatevera yakafanana simba senge mune mamwe akateedzana. Chitsauko chinoburitswa vhiki rega rega. Saka tine mwedzi miviri pamberi pedu yekunakidzwa nechirongwa chemutambo uyu. Kana iwe uchida kuziva zvishoma nezve izvi zvakateedzana, tinokukurudzira kuti upinde papeji Yepamutemo Webhu iyo Apple ine pairi.
Isu tinofungidzira kuti uyu mutambi uye kuve Stephen King nyaya, zvakaoma kuti akateedzana haana kunaka uye tinoda zvimwe. Mavhiki acho achaenda zvishoma nezvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Nhasi uno Apple TV nhepfenyuro inotanga + Nyaya yaLisey
AirTags kugadzirisa. Isu tinokuratidza maitiro ekuona kana yako iri yazvino